खोप लगाएकालाई ओमिक्रोन लागे के हुन्छ? - Himali Patrika	खोप लगाएकालाई ओमिक्रोन लागे के हुन्छ? - Himali Patrika
नेपालमा अहिले कोभिड-१९ संक्रमितको संख्या बढ्दो क्रममा छ। हामीले यसभन्दा अगाडि दुई वटा कोभिड-१९ लहरहरुलाई झेलेका छौं। पहिलो लहर कोभिड-१९ भाइरस र दोस्रो लहर डेल्टा भाइरस। यी भाइरसले धेरै मानिसलाई गाह्रो बनायो। ठूलो क्षति पनि भयो। विस्तारै कम हुँदै थियो।
अहिलेसम्मको अनुसन्धान हेर्दा ओमिक्रोन भेरियन्ट पहिलेको भाइरसभन्दा के फरक छ भने माथिल्लो श्वासप्रश्वास प्रणाली जुन छ, श्वास नलिमा इन्फेक्सन गराउँछ। रुघा बढी लगाउँछ। पहिलेको डेल्टा भाइरसले फोक्सोमा असर पुर्‍याउन सक्थ्यो।
निमोनिया गराउँथ्यो। ओमिक्रोनको लक्षण भनेको रुघा लाग्नु, जिउ दुख्नु, टाउको दुख्नु, ज्वरो आउनु हो। जसले भ्याक्सिन लगाएको छ त्यसलाई अफ्ठेरो बनाउने कम चान्स हुन्छ। माइल्ड इन्फेक्सन (हल्का संक्रमण) गराउँछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमति प्रेस ब्रिफिङमा संक्रामक रोग विशेषज्ञ प्रा.डा.जनक कोइरालासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित